Maxay Ku Qotantaa Colaadda Turkiga Iyo Kurdiyiinta Suuriya? [KA BOGO]
Wednesday 9th October 2019 14:39:54 in Wararkii Maanta by Xafiiska Hargeysa
Hoggaamiyeyaasha Turkiga waxay u arkaan kooxda YPG garab ka tirsan fallaagada PKK, oo muddo soddon sano ah u halgamayay madaxbannaanida Kurdiyiinta dalkaasi Turkiga.
Kooxda YPG ayaa hormuud ka ah isbahaysi ay ku midoobeen maleeshiyaadka Kurdiyiinta iyo Carabta ee la magac baxay Xoogagga Dimuquraadiga ee Suuriyra (SDF), kuwaasi oo dagaalyahannada kooxda Daacish ka saaray far meelood hal meel gudaha dalka Suuriya afartii sano ee la soo dhaafay, waxa ayna inta badan gacan ka helayeen duqeymaha xagga cirka ee isbahaysiga uu Mareykanka hoggaamiyo.
Turkiga ayaa cambaareeyay taageerada Mareykanka uu u fidiyay kooxda YPG, wuxuuna labo jeer duulaan ku qaaday maleeshiyaadkaasi Kurdiyiinta eek u sugan gudaha Suuriya.
Sanadkii 2018, Turkiga ayaa weeraray gobolka Afrin ee galbeedka Suuriya oo ay gacanta ku hayeen Kurdiyiinta, waxaana halkaasi ku dhintay sida la sheegay tiro dad rayid ah halka kumannaan kalena ay ku barakeceen.
Bishii Diseembar ee sanadkaasi ayaa madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay in Mareykanka uu billaabayo in ciidamadiisa uu kala baxo Suuriya, xilli kooxda Daacish ay qarka u saarnayd in laga adkaado.
Markii taliyeyaasha ciidamadiisa iyo xulafada ku wehlida dagaalka ka dhanka ah Daacish ay walaac ka muujiyeen xaaladda kurdiyiinta, wuxuu isla markiiba wacad ku maray in uu " burburin doono dhaqaalaha Turkiga" waa haddii buu yiri ay weerar ku qaadaan Kurdiyiinta basle wuxuu soo jeediyay in Turkigu uu dhul gaarsiisan 20-mayl oo ku yaal xadka uu ka sameysto "aag nabdoon".
Madaxweyne Trump ayaa markii dambe hakiyay ka bixitaankaasi, balse madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan ayaa sii waday in Mareykanka uu ku cadaadinayo sidii xudduudda Turkiga iyo Suuriya looga hirgelin lagaa "aag nabdoon".
Bishii Agoosto ee sanadkan ayaa Mareykanka iyo Turkigu waxay ku heshiiyeen in ay si wada jir ah xudduudda Suuriya iyo Turkiga uga hirgeliyaan aag ka caagan kooxaha hubeysan ee Suuriya. Saraakiisha Kurdiyiinta ayaa taageero u muujiyay arrintaasi waxayna maleeshiyaadka YPG billaabeen in ay faarujiyaan dhufeysyadoodii ku yiilay xudduudda
Haseyeeshee laba bilood uun kadib ayaa madaxweyne Trump wuxuu go'aansaday in Turkiga kaligii uu aagaasi ka sameysto xudduudda.
Madaxweyne Erdogan ayaa kalsooni ku qaba in haddii uu aag nabdoon ka sameeyo dhulka baaxaddiisu gaarsiisan tahay 480km uu noqon doono mid sugaya amniga xuduuda Turkiga, uuna hoy u noqon doono inta u dhaxaysa hal ilaa laba milyan oo qaxooti Suuriyaan ah.
Turkiga ayaa sidoo kale qaadi doona mas'uuliyadda dhammaan maxaabiista kooxda Daacish ee laga qabtay halkaasi, sida uu sheegay Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo.
Isbahaysiga SDF ayaa sheegay in Mareykanka uu "dhabarka ka toogtay", waxa ayna ka digayaan in weerarka Turkigu uu abuuri doono "aag ay ka jirto colaad joogta ah" isla markaana uu u lid ku noqonayo guushii laga soo hooyay dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish.
Muxuu Turkigu uga walwalsan yahay Kurdiyiinta Suuriya?
Dowladda Turkiga ayaa dareemeysa halis uga timaada garabka hubeysan ee kooxda Kurdiyiinta ee YPG.
Dowladda Turkiga waxay ku adkaysanaysaa in kooxda YPG ay tahay garab ka tirsan fallaagada PKK, oo dagaal kula jirtay ciidamada dowladda Turkiga tan iyo sanadkii 1984, isla markaana Mareykanka iyo Midowga Yurub ay u aqoonsadeen koox argagixiso.
Image captionXoogagga isbaheyisga Suuriya ee la dagaalama kooxda la magac baxday dowladda islaamka
Kooxaha YPG iyo PKK ayaa wadaaga fikir isku mid ah, haseyeeshee waxay ku doodaan in ay marnaba isku mid ahayn oo ay kala duwan yihiin.
Mareykanka ayaa sidoo kale ku gacan seyray aragtida Turkiga ee maleeshiyadkani oo ka fogaaday in ay dhinac la saftaan dagaalka siddeed sano jirsaday ee dalka Suuriya, balse garab u noqday waddamada reer galbeedka oo dagaal kula jiray kooxda la baxday Dowladda Islaamka ee Daacish.
Kooxda YPG ayaa ah awoodda ugu weyn isbahaysiga maleeshiyaadka Kurdiyiinta iyo Carabta ee la baxay Xoogagga Dimuquraadiga ee Suuriya (SDF). Iyaga oo kaashanaya duqeymaha dhanka cirka, taageerada dhanka hubka iyo la-taliyayaasha xulafada uu Mareykanka hoggaamiyo ayaa dagaalyahannada SDF waxay qabsadeen dhul ballaaran oo ku yaal waqooyiga-bari Suuriya oo gaaraya tobanaan kun oo kiiloomitir oo isku weer ah.
Maamulka madaxbannaan ayaa laga sameeyay gobolkaasi, waxaana la rumeysan yahay in halkaasi ay ku nool yihiin qiyaastii inta u dhaxaysa 500,000 iyo hal milyan oo Kurdiyiin ah iyo sidoo kale ugu yaraan 1.5 milyan oo Carab ah.
Turkiga waligii ma qaaday wax talaabo ah?
In kasta oo Turkigu uu qayb ka ahaa isbahaysiga uu Mareykanku hoggaaminayo ee ka dhanka ah kooxda la baxday Dowladda Islaamka, haddana Turkiga wuxuu mar kastaa aad uga soo horjeeday taageeridda SDF, wuxuuna marar badan isku dayay in uu joojiyo in ay la wareegaan ama qabsadaan xadka ku yaal waqooyiga Suuriya.
Sanadkii 2016-kii, milatariga Turkiga ayaa waxa uu taageeray weerar ay qaadeen kooxo gacan saar la leh isaga oo ah mucaaradka reer Suuriya oo ka saaray kooxda Dacish magaalada muhiimka ah ee xudduudda ku taal ee Jarablus, waxa ayna dagaalyahannada SDF ka hor istaageen in ay u dhaqaaqaan dhanka galbeed oo ay gaaran gobolka Kurdiyiinta ee Afrin.
Image captionRecep Tayyip Erdogan iyo Donald Trump waxay isku raacsan yihiin "goobo nabdoon" laga sameeya waqooyiga Suuriya
Mareykanku ayaa xilligaasi sidoo kale Turkiga ku qanciyay in uusan isku dayin in uu xoog ku qabsado magaalada Carabtu deggan tahay ee Manbij, balse hoggaamiyeyaasha Turkiga ayaa ku adkeystay in maleeshiyaadka SDF ay isaga baxaan aaggaasi oo weli ah goob dagaal.
Bishii Janaayo ee 2018, ayaa ciidamada Turkiga iyo mucaaradka xulafada la ah ee reer Suuriya, waxay billaabeen hawlgal ay kaga saarayaan dagaalyahanada YPG gobolka Afrin ka dib markii saraakiisha Mareykanka ay sheegeen in ay ka caawinayaan SDF dhismaha ciidan cusub "oo amniga xuduudaha loogu tala galay".
Koox u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha oo reer Suuriya ah oo fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in ku dhawaad 300 oo rayid ah lagu diley dagaal siddeed toddobaad socday. Dagaalkan ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay 1,500 oo ka mid ah maleeshiyaadka kurdiyiinta, 400 oo ka mid ah dagaalyahannada taabacsan dowladda Turkiga iyo 45 askari oo Turki ah. Ugu yaraan 137,000 qof oo rayid ah ayaa ku barakacay colaaddaasi.
Maxaa keenay arrinta "aag nabdoon"?
Bishii Diseembar ee sanadkii 2018, madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay in kooxda Dacish laga adkaaday, wuxuuna ku dhawaaqay in uu amar ku bixiyay in 2,000 oo askari oo Mareykan ah oo maleeshiyaadka SDF ee Suuriya caawinaya ay si deg deg ah uga abxaan dalka Suuriya.
Waddamada shisheeye ee xulifada la ah Mareykanka iyo mas'uuliyiinta sar-sare ee xisbiga Jamhuuriga ayaa ayaa shaki geliyay sheegashada madaxweyne Trump ee ah in laga adkaaday Daacish, waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda ay wajihi karaan Kurdiyiinta haddii uusan Mareykanka difaaceyn. Maalmo ka dib, ayuu madaxweyne Trump bartiisa twitterka ku soo qoray: "Waxaan burburin doonaa dhaqaalaha Turkiga haddii ay weeraraan Kurdiyiinta...."
In kasta oo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya uu dib u dhacay, haddana madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyeb Erdogan, wuxuu ku gacan seyray soo jeedinta Trump, wuxuuna sheegay in ciidamada Turkiga ay diyaar u yihiin in xudduudda Suuriya ay ka sameeyaan aag nabdoon.
Arintan ayaa mar kale soo if-baxday ka dib markii maleeshiyaadka SDF ay qabsadeen dhulkii ugu dambeeyay ee ay maamuleysay kooxda Daacish, bishii Maarso ee sanadkan 2019.
Bishii Agoosto, ayaa milatariga Mareykanka wuxuu sheegay in iyaga iyo Turkiga ay ku heshiiyeen qaab ahaan sidii laga yeeli lahaa arrimaha amni ee uu Turkiga ka walwalsan yahay. Waxaana lagu heshiiyay in wax laga qabto arrimaha ammaanka ee deegaannada ku teetsan xudduudda Suuriya iyo Turkiga, balse marnaba lama soo hadal qaadin arrinta "aag nabdoon".
Mareykanka ayaa markii dambe xaqiijiyay in YPG ay billaabeen in ay hubkooga culus ka gurtaan xudduudda isla markaana ay burburiyaan dhufeysyadii ay ku lahaayeen xudduudda. Maamulka Kurdiyiinta ayaa sheegay in tallaabadani ay muujisay sida ugu habboon ee loo sugi karo amniga deegaankaasi.
Image captionMadaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu rabaa inuu sameeya goob nabdoon oo 32 km isu wareeg ah
Maxay leeyihiin Kurdiyiinta Suuriya?
SDF ayaa ka digtay "weerarka aan loo qiildayi karin" ee Turkiga ee ku wajahan aagga ay Kurdiyiintu ka taliyaan, kaa oo ay sheegeen in uu saameyn xun ku yeelan doono dagaalka ay kula jiraan Daacish iyo xasilloonida iyo nabadda ay sheegeen in ay ka abuureen gobolkaasi sanadadii la soo dhaafay. "Waxaa naga go'an inaan difaacno dhulkayaga wax kastaa oo kacaba."
Lindsey Graham oo ah xildhibaan ka tirsan Aqalka sare ee Mareykanka isla markaana ay xulufo yihiin madaxweyne Trump ayaa tallaabada Mareykanka ku tilmaamay "musiibo soo wajahan", halka xiriiriyaha arrimaha gargaarka bini'aadanimada ee Qaramada Midoobay uu sheegay in ay "u diyaar garoobayaan dhibaato tii ugu xumayd".
Madaxweyne Trump ayaa markii dambe ku hanjabay in uu "gebi ahaanba burburin doono" dhaqaalaha Turkiga haddii buu yiri Turkigu uu qaado tallaabo "xad dhaaf
[Akhriso:-] Maxay Yihiin caqabadaha Ka Horyimid Qorshihii Raysal-Wasaare Abiy Uu Madaxweyne Farmaajo Ku Keenayey Hargeys
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan Oo ka Hadlay Tiradda Ciidamada Turkiga Lagaga Dilay Dalka Liibiya.
War Hadda Soo Dhacay:-] Reer Burco Oo Magacii Ka Badalay Barnaamijkii Shaqo Qaran + Waa Maxay Sababtu ?
[Akhriso:-] Maxay Yihiin Qodobada La Filayo In Muuse Biixi Kaga Hadlo Khudbada Uu Baarlamaanka U Jeedinayo Maanta ?